I-Ocean front e-Isle of Palms - I-Airbnb
I-Ocean front e-Isle of Palms
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Tracey
I-condo yethu esanda kulungiswa esitezi sesithathu isilungele ukukwamukela ukuze uthole ikhefu eliphumulele olwandle. Jabulela ikhofi lakho lasekuseni kuvulandi wakho oyimfihlo wokubuka ulwandle ubukele amagagasi engena. Ikhishi ligcwele izinto zokupheka nezitsha, ukuze ukwazi ukujabulela ukudla okuzenzela ukuze uqedele usuku lwakho oluhle. I-tv efakwe odongeni engu-65" egumbini lokuhlala izohlinzeka nganoma yikuphi ukuzijabulisa okudingayo uma ungathanda ukuhlala kuyo. Kunezindawo zokudlela ezimbalwa ezinhle nesitolo segrosa phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo.
I-condo yesitezi sesithathu (ayikho ikheshi) ingalala 6, kodwa 2 noma 4 kungaba intofontofo njengoba kuyindawo ethokomele (490 sq ft). Asincomi ngempela izihambeli ezingaphezu kwezi-4. Ngaphezu kombhede ongusayizi wenkosi (omusha kusukela ngo-Okthoba, 2020!) ekameleni elilodwa, kunombhede usofa ophumayo egumbini lokuhlala futhi kunemibhede emibili emincane (24" ububanzi) ephasishi lezingane ezincane. Ukulala, kodwa i-top bunk ayinayo isitimela sokuphepha njengoba ingavamile ukusetshenziswa Ibhilidi likwazi ukufinyelela kalula ogwini kanye nendawo yokudoba, kanye nendawo yokuwasha i-pool kanye ne-coin esizeni (awukho umshintshi wezinhlamvu zemali ngakho-ke letha izindawo zokuhlala. ). Ukufakwa okungenakhiye. I-Wifi Esemthethweni.
Indawo yaseFront Beach e-Isle of Palms idlangile futhi inezinketho eziningi zokwenza inkomishi emnandi yekhofi noma ukudla okugcwele. Noma ngabe ufuna ukudla okuvamile noma ukudla okumnandi, sinakho konke ngaphakathi kwebanga lokuhamba elilula.
Sihlala eduzane futhi siyatholakala uma udinga noma yini.